Phone ကိုကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည် | ထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုကာစီနို | £5အခမဲ့! |
နေအိမ် » Phone ကိုကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည် | ထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုကာစီနို | £5အခမဲ့!
ဖုန်းနှစ်မျိုး ကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည် ပေါ်လစီ!
ကစားတဲ့ကစား၏ပတ်ပတ်လည်ကံကြမ္မာအကြောင်းနှင့်အပန်းဖြေအခြေခံအားဖြင့်ကံကောင်းအပေါ်မူတည်. အဆိုပါကစားသမားအခြေခံအားဖြင့်သူတို့အပေါ်ရောက်ရှိမည်ဘောလုံးကိုလိုအပ်သောအရေအတွက်သို့မဟုတ် combo အပေါ်အာမခံရန်လိုအပ်သည်နှင့်ဘောလုံးကိုသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကစားသမားကိုအနိုင်ပေး၏နံပါတ်သို့မဟုတ်စုစည်းပြီးအပေါ်ရောက်ရှိလျှင်.
အွန်လိုင်းကလပ်မှ Coronation ကာစီနိုမှာနှလုံးရောဂါ Thumping အားကစားပြိုင်ပွဲ Play
အွန်လိုင်းကလပ်များတွင်ကစားတဲ့၏ပတ်ပတ်လည်များအတွက်မှ Coronation ကာစီနိုဘီးလှည့်သူတစ်ဦးကုန်သည်လည်းမရှိကစား. အလွှဲအပေါငျးတို့ပိုပြီးသရုပ်ြပရရန်နှင့်ကစားသမားမှ Coronation ကာစီနိုမှာအပန်းဖြေမှာအခမဲ့လက်ရနှင့်အတူကိုယ့်စိတ်ကူးတည်းဟူသောလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အပန်းဖြေပိုကောင်းနာ​​းမလည်ရန်အဘို့အ Phone ကိုကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်.
dedicated 24×7 ထိုကစားသမားများအတွက်ပံ့ပိုးမှုစနစ်
ဒီဆုချီးမြှင့်ထဲကအကောင်းဆုံးရရန်ဒီလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူသငျသညျယဇျပူဇျောနိုငျကွောငျးအွန်လိုင်းမှလောင်းကစားပူးတွဲကောက်ဖို့အရေးပါသည်. အဆိုပါအွန်လိုင်းကလပ်ပေးအပ် 24×7 client ကိုအုပ်ချုပ်ရေး ခိုလှုံလျှက်နှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်, လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ဒီအတောအတွင်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချ. အွန်လိုင်းကလပ်ကကမ်းလှမ်းဖုန်းကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်နှစ်ယောက်အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ, အောက်မှာမှတျတမျးတငျထားသော.
Phone ကိုကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည် – အခမဲ့ Twisted နှင့် Store ကဆုကြေး
အခမဲ့ Twisted: clients များကမ်းလှမ်းဖုန်းကိုကစားတဲ့၏ပထမဦးဆုံးမျိုးကိုအဘယ်သူမျှမသိုက်လိုအပ်သောအခမဲ့စပွေီးမှဖြစ်ပါသည်. ဤသည်၌အခြားအွန်လိုင်း clubhouse သို့အတွက်ကစားသမားနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသူတို့တစ်တွေစံချိန်နှင့်လျှို့ဝှက်စကားလုံးဖွင့်လှစ်ရန်ရှိသည်အခါ,. အောက်ပါအဆင့်ကိုတစ်ဦးမိတ်ဆက်စတိုးဆိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်, သောအာမခံနေရာလိုအပ်ပါသည်.
client ကိုလူအပေါင်းတို့သည်စတိုးဆိုင်များစေသည်သည့်အခါအမှတ်မှာအောက်ပါအရာလျော်ကြေးပေးပြဇာတ်ကစားတဲ့ထဲကအများဆုံးအခမဲ့ရရန်အွန်လိုင်းကစားတဲ့ tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးစေ့ဆော်မှုအလွှဲနားမလည်ရန်၎င်း၏ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်ကစားသမားများအတွက်အခမဲ့စပွေီးမှထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်အွန်လိုင်းကလပ်.
လှုံ့ဆျောမှု Get, ထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုမှကစားတဲ့နှင့်ဦးဝင်းဆုလာဘ် Play
သိုက်ဆုကြေး: ကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည် clients များကမ်းလှမ်းဖုန်းရဲ့ဒုတိယမျိုးစတိုးဆိုင်အကျိုးသည်. သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းကလပ် join ဖို့စေ့ဆော်မှုအလွှဲအပေါ်အာမခံထားရန်သူတို့အဘို့အဒင်္ဂါးပြား၏အခမဲ့ထပ်ပေးစွမ်းသည်အတိုင်းဤအွန်လိုင်း clubhouse ခုနှစ်တွင်. ဤ, သငျသညျအများအပြားထူးထူးအထွေထွေရှိငြားကစားရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်အထူးသဖြင့်ပိုက်ဆံသွင်းထားရန်မလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်ကစားကစားတဲ့အခမဲ့လွှဲနားမလည်ဖို့အခြားအရေးကြီးသောလှုံ့ဆျောမှုအင်အားသည်.